China RCL-2518 Factory sy mpamokatra LED Linear Light miorina eo anoloana | lafo vidy
Jiro LED avo lenta avo lenta amin'ny karatra, vatana jiro aliminioma, fitarihana hafanana mahery ary tsy misy fiovana,
manatsara ny fiainan'ny vakana jiro LED.
Ho an'ny faran'ny aloha amin'ny laminate 18mm dia mamoaka hazavana mihemotra sy midina izy: ny halaliny dia normal tahaka ny -2mm
Jiro mafana 3000K.
Jiro voajanahary 4200k.
Jiro mangatsiaka 6000k
1. Ny andian-jiro hazavana LED dia jiro haingon-trano avo lenta miaraka amin'ny fanjifana herinaratra ambany, fiainana lava, famirapiratana avo, mora miondrika ary tsy misy fikojakojana. Ny akorany jiro dia vita amin'ny firaka aliminioma, misy tsipika mazava, firafitra tsotra ary fisehoana tsara tarehy. Matanjaka, mahazaka harafesina ary mora apetraka.
2. Fiarovana amin'ny tontolo iainana ny angovo tsy mitahiry angovo sy tsy misy loto. Drive DC, fanjifana herinaratra ambany faran'izay ambany, fanovana herinaratra elektrika-optika manakaiky ny 100%, ny vokatr'io hazavana io dia mihoatra ny 80% fitsitsiana angovo noho ny loharanom-pahazavana nentim-paharazana.
2.Ny loharanom-pahazavana jiro LED dia antsoina hoe jiro lava lava, izay midika hoe jiro tsy maty mihitsy. Loharano mangatsiaka mangatsiaka-panjakana, encapsulation resin epoxy, tsy misy faritra malalaka ao amin'ny vatan'ny jiro, tsy misy fandroana filamenta, fametrahana setroka, hazavana maivana ary lesoka hafa. Ny androm-piainan'ny serivisy dia mety hahatratra 50 000 ora, izay mihoatra ny 10 heny noho ny an'ny hazavana nentim-paharazana.
Ny mari-pana amin'ny loko - Ny jiro LED Linear dia manolotra maripana miloko marobe, izay misy fiatraikany amin'ny fomba fandikan'ny maso ny mazava. Manomboka amin'ny fotsy mangatsiatsiaka ka hatramin'ny fotsy mafana, ny mari-pana samihafa dia azo ampiasaina hamoronana toe-po sy rivotra iainana amin'ny habakabaka. Ny fotsy tsy miandany, na 4000 kelvin hampiasa ny anarany ara-teknika, dia atolotra ho an'ny birao sy faritra fivarotana izay manome tontolo tena milay.
Teo aloha: RCL-2318 Fahazavana an-jorony LED hazavana ambany
Manaraka: RCL-4502 Hazavana Linear LED eo anoloana